Didier Deschamps oo ka hadlay xaallada Griezmann kaddib ku biiristiisa kooxda Barcelona – Gool FM
Didier Deschamps oo ka hadlay xaallada Griezmann kaddib ku biiristiisa kooxda Barcelona
Dajiye November 8, 2019
(France) 08 Nof 2019. Tababaraha xulka qaranka France ee Didier Deschamps ayaa aaminsan in Antoine Griezmann uu ku raaxeysan doono mustaqbalkiisa iyo waqtigiisa kooxda Barcelona.
Didier Deschamps ayaa dhinaca kale tilmaamay in Antoine Griezmann uu u baahan yahay waqti ku filan si uu ugu gaaro heerka ugu fiican garoonka Camp Nou.
Griezmann ayaa ka soo tagay Atletico Madrid wuxuuna u dhaqaaqay Barcelona xagaagii lasoo dhaafay, isaga oo heshiiska uu ku kacay qiimo lacageed lagu qiyaasay 120 milyan oo euros, laakiin ilaa iyo haatan ma uusan gaarin heerka ay ka sugayeen maamulka iyo taageerayaasha kooxda reer Catalonia.
28-sano jirkan ayaa ku dhaliyay kaliya afar gool ilaa iyo haatan maaaliyada kooxda Barcelona, wuxuuna si weyn ugu hor dhibtooday labadii kulan ugu dambeysay ay la ciyaareen kooxaha Levante iyo Slavia Prague.
Haddba Didier Deschamps ayaa shir jaraa’id uu ka soo muuqday wuxuu kaga hadlay xaalada uu haatan kaga sugan yahay Antoine Griezmann kooxda Barcelona wuxuuna yiri:
“Wax walwal ah kama qabno Antoine Griezmann, xitaa hadii uu la ciyaarayo ciyaartoy sarsare oo kooxda Barcelona ah, laakiin nidaamka is dhexgalka kuma imaanayo habeen iyo maalin, waxay kuxirantahay sida ay u ciyaaraan iyo sida ay u wada shaqeeyaan”.
“Waa inuu sidoo kale la qabsadaa dadka kale, sababtoo ah ma uusan sameynin doorasho sahlan, u ciyaarista koox weyn ayaa ka dhigaysa in laga sugo waxyaabo waaweyn, marwalbana waa ciyaaryahan ka mid noqon kara kooxda”.
“Anaga ahaan xulka qaranka Antoine Griezmann wuxuu inoo yahay xubin muhiim ah, wuxuuna awoodaa inuu ka ciyaaro xarimaha ugu fiican ee dhanka weerarka ah”.
Jurgen Klopp oo helay war aad u fiican kahor kulanka soo aadan ay Liverpool la ciyaari doonto Man City
Man City oo fariin digniin ah u dirtay Liverpool kahor kulanka ka dhici doono garoonka Anfield